Loza mitatao ! | NewsMada
Loza mitatao !
Par Taratra sur 11/10/2018
Miova tokoa ny toetr’andro. Raha taona maromaro lasa izay, zara raha nisy ny rotsak’orana amin’ny fanombohan’ny volana oktobra, nitsimbadika izany ankehitriny. Nitondra hatsiaka mihitsy ny fiavian’ny orana ka nahazo aina kely ny mponina an-tanàn-dehibe, sempotry ny hafanana, ny fofon’ny fako tsy voaraoka intsony, ny tabataban’ny fampielezan-kevitra, ny fitohanan’ny fifamoivoizana toy mihamafy hatrany. « Tsy mbola fahavaratra izao », hoy ny mpamantatra ny toetry ny andro, saingy ho avy tsy ho ela izany. Ka io toe-javatra io no mampanahy.
Raha vao mitohy roa na telo andro ny orambe, ho simba ireo lalana mampitohy ny faritra mamokatra vary. Tonga ilay fotoan’ny maitsoahitra ka hidangana avokoa ny vidin-javatra. « Tsy roniny tsy ventiny eo”, araka ny fomba fiteny mahazatra. Ny arina fandrehitra, matetika, tratry ny olana ihany koa rehefa mikija ny orana ary tafakatra avo roa heny ny vidin’ny gony iray. Tsy ampy ny tolotra ary mihasarotra ny fampiakarana azy aty an-dRenivohitra noho ny faharatsian’ny lalana ka mirehitra ny vidin’ny iray gony.
Ny fidiran’ny mpianatra, etsy andaniny, tsy maintsy hatrehina. Ny fetin’ny faran’ny taona, homanina koa. Soa fa nisy ireo kandidà mizara volabe etsy sy eroa hamoriana vahoaka ka manala fahasahiranana na vetivety ihany aza. Betsaka ny kandidà mampanantena sahady fa ho lany amin’ny fihodinana voalohany. Izany kabary izany no mety hiteraka krizy politika vaovao indray. Raha tsy lany izy ireny, hilaza indray fa hala-bato bevata ny nisy teto kanefa tsy voatery ho voavidy daholo ny mpifidy.
Ka raha izao vidim-piainana efa tsy zaka izao no mbola hampiana adilahy politika noho ny fitiavan-tseza diso tafahoatra, asa izay hitranga. Sarotra anefa ny hino fa tsy hatao izy ity. Efa mandeha ny fanomanana isan-karazany. Manao izao ho afany ny mpifandrina. Ny vahoaka tsimandadiharona, mba mahazo jinjany kely na tee-shirt fotsiny ihany aza. Satria resabe fotsiny izany ady amin’ny fahatrana izany fa tsy ho tanteraka akory. “Rehefa azony ny toerany, ny sakafonao no ferany”, hoy ry Mahaleo milaza azy. Tsy mety fay anefa ny Malagasy, sanatria tsy handatsa fa tsy omby vava moa ny patsa, fa mbola hanome ny vatony ho an’ireo efa nitondra azy tany an-kady. Izay tokoa angaha ilay hoe politika avo lenta. Toa loza mitatao ho an’ny hoavin’ny firenena iray manontolo.